Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, Cadadkii maanta, Axad, 30 Sept.
September 30th, 2007 Comments Off "Waxa jiray is-bahaysi ka soo horjeeday Wakiillada cusub iyo dareenadii shacbiga"
Gudoomiyaha Golaha Wakiillada
Hargeysa (Ogaal)- "Golaha waxa loo doortay inuu xeerar Ummada u sameeyo, mudadaa uu jirayna waxanu saaray illaa 10-xeer in kastoo caqabado badan uu dhinacyo badan kala kulmay Goluhu dhinicii wada shaqaynta xukuumada iyo Golaha Guurtidaba, hase yeeshee dadaalkii aanu samaynay waxa uu noo suurtageliyay illaa 10-xeer inaanu samayno, xeerarkaas illaa hada 3- ka mid ah ayuu Madaxweynuhu saxeexay. Go’aamo badan oo kale oo intii Golaha la soo doortay shaqaynayay-na way jiraan, wax soo saarka Goluhuna intaa wuu ka badan lahaa hadii uu wada shaqayn toos ah ka helayo xukuumada." Sidaa waxa yidhi Gudoomiyaha Golaha Wakiillada md, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo Idaacada Horyaal waraysi uu siiyay kaga waramay xuska sanad-guuradii labaad ee Golaha Wakiilada la soo doortay waxyaabaha u qabsoomay iyo caqabadaha ka hor-yimi.
Gudoomiyaha Wakiilladu waxa uu qiray inaan Goluhu u wada gudan waajibaadkii laga filayay. Taasoo uu sabab uga dhigay wada shaqayntii loo baahnaa oo Golihiisu ka waayay Golayaashii dawlada. "Taas waxaan u qabaa inay ugu wacantahay wada shaqayntii Wakiillada iyo shacbiguba ka filayay xukuumada iyo Golaha Guurtida oo aanaan ka helin" Ayuu yidhi Gudoomiyaha Wakiilladu.
Gudoomiyaha oo ka jawaabay su’aal laga waydiiyay aragtiyaha aaminsan in Wakiillada la soo doortay ku noqdeen xukuumada caqabad, halkii laga eegayay inay wax soo kordhiyaan waxa uu yidhi. "Ilaa maalintii la soo doortay waxaanu isku daynay inaanu waxii aanu fududayn karayno inaanu fududayno, laakiin waxaad moodaa in is bahaysi si uun uu u jiray lagaga soo horjeeday Golahan Cusubi, taasoo aad moodo inay dhinacyo kale qabaan aragti ka duwan dareenadaa dadweynuhu ay qabaan, " Gudoomiyaha Wakiillada oo ka hadlaya balanqaadyadii mudanayaashii u tartamay Wakiiladu ay sameeyeen xiligii doorashada iyo aragtiyaha wakhtigan dadka qaar ku saluugeen waxa uu yidhi. "Dadweynahu ma qaldana, waayo hore umay tijaabin dadkii isa soo sharaxay, laakiin waxay ila tahay imika in dadku kala bartay kii ka runsheegay wixii uu balanqaadayay ee dantooda difaacayay iyo kii aan difaacayn."
Md, Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay illaa hada inaanay maqal in Madaxweynuhu ku dhaqmay go’aamadii gudigii dhex-dhexaadintu soo saareen ee dhiniciisa khusaynayay, taasoo uu tilmaamay in fulintooda weli laga sugayo dhinaca xukuumada. Dhinaca kale shirgudoonka Golaha Wakiiladu warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku hanbalyeeyay dadweynaha, isaga oo tilmaamay in doorashadii Golahani ahayd guul weyn oo shacbigu gaadhay.
M. Rayaale: "Fuata Nyayo (Aniga igu dayda)"
Rayaale: "Wuxuu aaminsan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ahaado Madaxweyne inta uu nool yahay"
"Waxa aad u sii daciifaya dhaqaalihii iyo horumarkii dalka, isla markaana ma jirto cid xisaabinaysa xukuumadda talada dalka haysa. Dhamaan waxyaabahaasi waxay ku yimaadeen hadoodilka magaca dimuquraadiyadda, isla markaana isku-day kasta oo lagu bedelayo habkaas ama lagaga soo horjeesto xaaladdahan aan loo dulqaadan karayn, ayaa durabadiiba waxay inta awoodda talada haysaa u rogaan in isku-dayaddaasi ay yihiin kuwo lagu wiiqayo xasiloonida dalka. Sidaa aawadeedna, waxa dadweynihii lagu dhaafaa cod la’aan iyo iyaga oo aan haynin wax hab macne leh ah oo lagaga hadli karo jaah-wareerkan. Waxa intaa ka horaysa in dadku ay qaadaa dhigayaan murugada iyo afla-gaadooyin xun-xun oo ay u jeedinayaan dawladdan aadka ugu dhaw inay u ekaato dawladdii argagaxa lahayd ee guuldaraysatay waqtiyadii la soo dhaafay (nidaamkii Siyaad Barre), isla markaana ma jiro jid lagaga baxayaa xaaladdan u muuqata in aanay suuragal ahayn, iyada oo aan khatar badan la gelinin nabadgelyadii mudada dheer soo taagnayd ee sida adag ku timi.
Su’aasha mar kasta taagani, waa sidee ayay ciddi u keeni karaysaa isbedelka loo baahan yahay, marka aanay dimuquraadiyaddiiba u muuqanin mid shaqaynaysa? Xikmad qadiimi ahayd, ayaa odhanaysay; Cid kastaaba waxay danaynaysaa horumarka dimuquraadiyada, si ay dadweynuhu aad u laasimaan dimuquraadiyadda; xataa iyada oo aanay jirin dimuquraadiyad muuqata oo shaqaynaysaa. Saadaasha waxa ka dhacaya Somaliland xilligan, iyada oo uu maamulkani awoodda hayo, ayaan u muuqanin in waxa ugu yar laga yidhaahdo. Mashaakilaadkan maanta horteena yaala iyo sida aynu ula tacaalayno arrintani, waxay saamayno cajiib ah ku yeelan doonaan sida ayni ku xalinayno arrimaha adag mustaqbalka soo socda. Tallaabada ugu wanaagsani waa in aynu door-bidno sidii aynu dhamaanteen uga shaqayn lahayn uun wixii yimaadda ee fudud, taasina waa in aynaan waxba samayn, oo aynu rajayno uun wixii ugu wanaagsan. Labadaaba si fudud ayaa loo sameeyaa, balse, haddana labada fikradoodba way khaldan yihiin. Waxaynu dhamaanteen ku xidhiidhin karnaa fikraddan, ama aynu innaga lafteenu ogaan karnaa in mashkilad kasta oo xasaasi ah, oo halkaa (Somaliland) ka jirtaa ay tahay mid fudud, loona heli karo xal ku haboon.
Ujeedada iyo biyo-dhaca:
Saddaam Xuseen wuxuu ahaa hoggaamiye xun, dabadeedna xalkii la fudaydsaday ayaa noqday in Ciraaq la qabsado. Asal ahaan, halka ay ka yimaadeen khilaafaadka haatan taaganina, waxay diirada saarayaan in ay is-qaadan waayeen maamulkiisii mudada dheer soo jiray iyo fikraddii burburka maamulka madaxweynihii awoodda badan lahaa ee nidaamkiisa awooddihiisu aanu sinayn. Hadda, Labada Aqal ee Baarlamaanku (Wakiillada iyo Guurtida Somaliland) way kala qaybsan yihiin, mana awooddaan inay gudbiyaan wax shuruuc cusub ah, hay’addii garsoorka ayaa u taagan wax aan ka badnayn inay fidiyaan awooddaha madaxweynaha (Rayaale), maadaama uu isagu iyagii (xubnaha garsoorka) magacaabayo, isla markaana uu shaqada kaga qaadi karayo rabitaankiisa (ma jirto awood noocaas oo kale ah, oo uu madaxweynaha ?Rayaale’ dastuurku u baneeyay), isla markaana marka la tixgeliyo arrimaha haatan soo baxaya, Mr Rayaale waxa uu qabanayaa shaqo qurux badan oo wanaagsan, isaga oo isku metelaya nin miisaan culus leh, una muuqda mid caadaystay inuu isku sheego nin aan ujeedadiisa waxba laga ogayn, si uu u sababeeyo hoggaamintiisa wanaagsan. Ka hor inta aynaan gebogabadan, waa in mid lagu xisaabtamaa, taariikhdiisii (Rayaale) hore iyo xaaladdihii isaga (Rayaale) keenay kursiga awoodda, iyo weliba waxyaabihii uu bartay/ogaaday markii uu kursiga madaxweynenimo fuulay. Waxa uu soo dhex-jiidhay (Rayaale) dariiq dhaawac badan lahaa, kaasoo keenay meel uu kala mid noqdo Madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi, oo hal-ku-dhegiisu ahaa, "Fuata Nyayo, " taas oo macneheedu yahay, "Aniga igu dayda." Mr Rayaale, sidii Arap Moi, waxa uu yimi markii loo soo xushay jagada madaxweyne-ku-xigeennimo, sababta oo ah labada ninba (Rayaale iyo Ar